I-Fiber Optic PLC Splitter Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Fibre Optic PLC Splitter Factory
I-fiber optic PLC splitter, ebizwa nangokuthi i-planar waveguide ciruit splitter, iyithuluzi elenzelwe ukuhlukanisa imishayo ekhanyayo eyodwa noma emibili ngokukhanya okufanayo noma ihlanganise imishayo eminingi yokukhanya emishayweni eyodwa noma emibili ekhanyayo. Iyidivayisi ekhethekile futhi inamatheminali amaningi wokufaka nawokukhipha asetshenziswa kakhulu kunethiwekhi yokwenziwa (GPON, FTTX, FTTH).
I-PLC splitter inikeza isisombululo sokusabalalisa ukukhanya esinezindleko eziphansi ngokuzinza okuphezulu nokuthembeka, ubuningi bokugcina bokuxhuma ngu-1 * 2, 1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64 SC / APC noma SC / UPC.
IJera inikeza i-fiber optic cable splitter kufaka phakathi:
1) I-fiber optic PLC Cassette splitter
2) I-Mini PLC Cassette splitter
3) I-PLC splitter, module ye-ABS
4) Kuhlukaniswe i-fiber PLC splitter, i-blockless PLC splitter）
I-Jera cassette PLC splitter esebenza ngokungaguquguquki, ukulahleka okuphansi kokufakwa kwe-optical, ukulahleka okuphansi kwe-polarization, ukuthembeka okuphezulu nokuqina, izici eziphakeme zemvelo nezomshini, nokufakwa okusheshayo.
Ukubhekana nezidingo eziqhubekayo zokwenyuka komkhawulokudonsa ophakeme, sidinga ukufakwa okusheshayo, iziqhekezi ezinokwethenjelwa ze-PLC ukuhlinzeka ngezixhumanisi ze-fiber optic ngesikhathi sokwakhiwa kwenethiwekhi ye-FTTX ne-PON. I-splitter ye-PLC ivumela abasebenzisi ukuthi basebenzise i-interface eyodwa yenethiwekhi ye-PON, ikhulisa amandla womsebenzisi wenethiwekhi ye-fiber fiber, futhi inikeze isisombululo esihle kakhulu sabakhi benethiwekhi.
Sicela uzizwe ukhululekile ton uxhumane nathi ukuze uthole ulwazi oluzayo.